युवालाई कुलतबाट जोगाउनुपर्छ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
युवालाई कुलतबाट जोगाउनुपर्छ
युवाहरूलाई कुलतबाट जोगाएर सिर्जनशील बाटोतर्फ लगाउनुपर्छ (ड्रग्ससँग साटिन्छ जवानी) । समाजमा यसको कुलतको जरा डरलाग्दो गरी फैलिएको छ ।
बधाई छ सुरभी मानन्धरलाई (सुरभीलाई मिस डिफ एसियाको उपाधि) अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नाम चम्काउन सफल भएकोमा गर्व लागेको छ ।
- सुमिना कार्की
पल शाह नेपालका सबैभन्दा राम्रा कलाकार हुन् (गसिप : पललाई चुनौती) । भावी दिनमा उनको अझ राम्रो अभिनय हेर्न पाइयोस् ।
- छुच्ची डन, गणेश जिएम
आम मानिसले उनीहरूका बारेमा सुनेका छैनन् (गजुरियल विश्लेषण : पार्टी एकताको लहर) । उनीहरूको प्रचार–प्रसारमा कमी भए जस्तो लाग्यो । नयाँ खुलेका पार्टीहरू ग्रामीण भेगसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । आशा छ, जनताले नयाँ पार्टीलाई पनि अवसर दिनेछन् ।
- ब्रिजेन क्षेत्री
सनिले चर्चामा आउन यस्तो कुरा बोलेकी हुन सक्छिन् (बलिउड गफ : सनी आमा बनिन्) । खोजीखोजी मसाला बनाउने मिडियाका लागि उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिनै पर्याप्त भयो ।
- विजय राई
नेयमारको जुत्ता शोख गजबकै रहेछ (मैदान बाहिर : नेयमारको जुत्ता सौख) । यो नौलो खालको प्रयोग हो ।
साप्ताहिक पत्रिका राम्रो छ । लागूऔषधको प्रयोगबाट हुने नोक्सानीका बारेमा पनि केही लेख्नुपर्‍यो । तमाम युवाहरूलाई सुसूचित गर्नुपर्‍यो ।
- गोपीप्रसाद सिंह
साप्ताहिकको सिको गर्दै आजकाल धेरै पत्रिका आए पनि साप्ताहिक नपढी मनै मान्दैन ।
- नारायण पौडेल
साप्ताहिकमा प्रकाशित रमाइला तथा रोचक कुराहरूले युवा पुस्ताको मन छोएको छ ।
- प्रदीप न्यौपाने
सबैभन्दा सजिलो भनेकै अरूका बारेमा धारणा बनाउनु त हो नि (युवा मन : धारणा) । त्यसैले मानिसहरू अरूका बारेमा टिप्पणी गर्छन्, धारणा बनाउँछन् अनि उपदेश दिनसम्म पछि पर्देनन् ।
- राहुल पाख्रिन
सुरेश जस्तै आम युवाले आन्तरिक पर्यटनमा योगदान दिनुपर्छ (यात्रा सन्दर्भ : स्वदेश दर्शनको लहर) । ओझेलमा परेका यस्तै सुन्दर ठाउँहरूका बारेमा मिडियामा बढीभन्दा बढी प्रचार–प्रसार हुनु आवश्यक छ । विदेश गएर पैसा खर्च गर्नुभन्दा स्वदेश घुम्नु कैयौं गुणा बढी फाइदाजनक छ । स्वदेशमा थोरै पैसामै धेरै ठाउँ घुम्न सकिन्छ ।
- उदेश पाण्डे
डा. प्रकाश थपलिया जस्ता युवालाई स्वदेशमा स्वागत छ (अन्तर्वार्ता : नेपालमा कमाउने तरिका भद्र लाग्दैन) आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिभा, योग्यता, क्षमता भएका नेपालीहरूले स्वदेशमै केही गर्ने हो भने नेपाललाई नमुना बनाउन सकिन्छ ।
- राजेश खड्का
नेपालको कृषि क्षेत्रमा यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन मानिसहरू बिदेसिन्छन् ? (रोजगार : कृषि वैज्ञानिकलाई अवसर) यतातिर सरकारले बजेट बढाएर बढीभन्दा बढीका लागि रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
- सुशील पंगेनी
कुनै पनि कुरा चाहिनेभन्दा बढी प्रयोग गर्दा यस्तो अवस्था आउँछ (साइन्स एन्ड टेक्नो : सामाजिक सञ्जाल डिप्रेसनको कारक) । सही काममा, सही समयमा प्रयोग गर्दा भने फाइदा नै हुन्छ ।
- प्रकाश श्रेष्ठ
रेजिना शाक्यलाई बधाई छ (मिसेज नेवामा रेजिना शाक्य) । अन्य प्रतिस्पर्धामा पनि सफलता मिलोस्– शुभकामना ।
- रुपेश बिस्ट
लोकदोहोरीका क्षेत्रमा नयाँ पुस्ता उदाउनु आवश्यक छ (रामजी खाँड र टीका पुन उत्कृष्ट) । आधुनिकताले बजार लिएका बेला मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु कलाकारका साथै हामी सबैको कर्तव्य हो ।
- दीपेन्द्र खनाल
जीपी तिमिल्सिनाको परीक्षा अब सुरु भएको छ (फिल्मी डायरी : जीपी अब निर्देशक) । उनको कामको परिणामबाटै चलचित्रमा उनको सफलता सफलताको निक्र्यौल हुनेछ ।
विदेशमा रहेका युवालाई के भन्नुहुन्छ ?
शाही परिवारका लागि खुसीको कुरा श्रावण ६, २०७५
मदन पुरस्कारका लागि पुस्तक सूची सार्वजनिक पछिका टिप्पणी असार ३२, २०७५
रोल्वालिङको विपन्न शेर्पा परिवारको कथाले मन छोयो असार ३१, २०७५
विश्वकपका किपर ज्यानमारा नेपालका टिपर ज्यानमारा असार ३०, २०७५
नेपाली नेताहरूमा यति फुटबल मोह रहेछ असार २४, २०७५
विश्वकप फुटबल प्रतिकृया असार २३, २०७५
लिभिङ टुगेदरले समस्या निम्त्याइरहेको छ असार १८, २०७५
विश्वकप फुटबलका सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया असार १६, २०७५
कसको भविष्यवाणी मिल्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ असार ९, २०७५
होइन यो विश्वकप फुटबल नेपालमा हुँदैछ कि रुसमा ? असार ८, २०७५